GỤỌ NKE Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Latvian Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Marathi Mauritian Creole Maya Mixe Mongolian Nepali Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tshiluba Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Yoruba Zapotec (Isthmus)
Ị HỤ osisi oliv kara nká ma hịgọọ ahịgọọ, o nwere ike ịdị gị ka o nweghị ihe ọ bụ ma e jiri ya tụnyere oké osisi sida dị na Lebanọn. Ma osisi oliv na-akpa ike dị egwu. O nwere ike ịnọ ọtụtụ afọ, ọ bụrụgodị n’ebe mmiri na-adịghị ma ọ bụ n’ebe bụ́ okwute okwute. E nwere osisi oliv ndị dị ihe dị ka otu puku afọ. Otú mgbọrọgwụ osisi oliv si abami n’ime ala na-eme ka o nwee ike ipute nke ọhụrụ, é gbutugodị úkwù ya. Ọ bụrụhaala na mgbọrọgwụ ya ka dị ndụ, ọ ga-epute nke ọhụrụ.
Obi siri Job ike na ọ bụrụgodị na ya anwụọ, na ya ga-adị ndụ ọzọ. (Job 14:13-15) O ji osisi mee ihe atụ iji gosi na obi siri ya ike na Chineke ga-akpọliteli ya n’ọnwụ. O nwere ike ịbụ osisi oliv ka o bu n’obi. Job sịrị: “Osisi nwere olileanya. Ọ bụrụ na e gbutuo ya, ọ ga-epulite ọzọ.” Ọ bụrụ na mmiri ezoo mgbe oké ọkọchị kọchara, úkwù osisi oliv kpọrọ nkụ nwere ike isi na mgbọrọgwụ ya pute nke ọhụrụ ga-emecha ‘waa alaka dị ka osisi pulitere ọhụrụ.’—Job 14:7-9.
Otú ahụ onye ọrụ ugbo na-atụsi anya ike ka osisi oliv e gbuturu egbutu pulite ọzọ ka ọ na-agụsi Jehova Chineke agụụ ike ịkpọlite ndị ohu ya na ọtụtụ ndị ọzọ n’ọnwụ. (Mat. 22:31, 32; Jọn 5:28, 29; Ọrụ 24:15) Chegodị ụdị aṅụrị ga-eju anyị obi mgbe anyị ga-amakụ ndị a kpọlitere n’ọnwụ, hụkwa ka obi dị ha ụtọ na ha adịla ndụ.